mpisolovava an'i Rosia
sazy ara-tsara — ny dikany teny rosiana amin’ny teny rosiana ireo Mpisolovava
Ampahany iray amin’ireo Andininy iray roa-polo — folo fanafihana ny sambo any amin’ny avo ranomasina miaraka amin’ny tanjona mba hisambotra fa sambo, na ny entana dia nitondra, na hanisy ratsy ny olona rehetra tao an-tsambo. Ny mombamomba ny volavolan-dalàna dia ho hita amin»ny mandrakizay malaza kokoa fironana mankany amin’ny tsy fifandeferana, ny fankahalana vahiny ary ny fanavakavahana na amin’ny Danemark sy ny any ivelany». folo Fampielezan-kevitra miasa, fantany toy ny maty paika». Amin’io lafiny io, ny lahatsoratra L. ny Fehezan-dalàna mifehy ny Teny sy ny toeram-Ponenana, ny Vahiny sy ny Tsara Fialokalofana, nasiam-panitsiana ny Fihetsika efatra amby roa-polo tamin’ny volana
Ny manampahefana rosiana fipoahana ireo sazy avy amin’ny Tandrefana tamin’ny maty mpisolovava ny raharaha RT Rosia Vaovao
Mpisolovava Sergey Magnitsky maty tany mialoha ny fitsarana am-ponja ao Rosia tamin’ny taona Ny antenimiera no antenaina mba hahatonga ny fanapahan-kevitra farany mikasika ny olana ao amin’ny desambra Teo aloha ny alakamisy teo, ny lefitry ny minisitry ny raharaham-bahiny Aleksandr Grushko nilaza tamin’ny mpanao gazety fa i Rosia dia raisina ny fanapahan-kevitry ny Parlemanta Eoropeana miharihary fitsabahan’ny any Rosia ny raharaha anatiny sy ny ezaka fanerena ny fahamarinana. Nilaza ihany koa ilay fanapahan-kevitra mandika ny Fifanarahana Eoropeanina momba ny zon’olombelona Tamin’ny volana septambra, ny Kaongresy AMERIKANA nanaiky ho an’ny fiheverana ny Rariny ho Sergey Lalàna Magnitsky ny taona, izay soso-kevitra
Rosiana ny mpisolovava — Vaovao, Lahatsary Lahatsoratra
Mpisolovava rosiana izay lasa tamintsika ny famotorana raha nisy ny fifandonana misy eo amin’ny Rosiana sy ny Filoha Donald Trump ny fampielezan-kevitra dia voampanga amin’ny tsy misy ifandraisany amin’ity raharaha ity. Tohizo ny famakiana Ny mijery ny Trompetra ekipa miovaova ny fanazavana ny fivoriana, ary nahoana no zava-dehibe. Tohizo ny famakiana notombohina tamin’ny vy afa-po dia nosoratana na amin’ny anaran’ny ny manohana ara-bola sy ny tsy Vaovao Manerantany’ ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana. Notombohina tamin’ny vy afa-po dia nosoratana na amin’ny anaran’ny ny manohana ara-bola sy ny tsy Vaovao Manerantany’ ny mpiasa miandraikitra ny fanoratana. Raha te-hianatra bebe kokoa Ny
Tsara Indrindra Mpisolovava
Ny faha-efatra isan-taona ‘ny Vehivavy ao amin’ny Lalàna’ ny Raharaham-barotra Fanontana ny endri-javatra rehetra vehivavy mpisolovava fantatra ao amin’ny taona, Fanontana Ny Tsara indrindra Mpisolovava any Amerika, ny tafatafa nifanaovana tamin’ny Congresswoman Lizzie Fletcher, sy ny fanampiny matoan-dahatsoratra content nandrakotra ireo olana goavana Fantaro izay mpahay lalàna dia ahitana
Mpisolovava asa Rosia. Mba mpahay lalàna asa
Mba mpahay lalàna asa Rosia Hatsarana, mpahay lalàna sy ara-dalàna ny asa
Ny lalàna vaovao manamora ny fomba hahazoana zom-pirenena ho an’ny mpampiasa vola vahiny — Rosia Mihoatra ny
Ny Praiminisitra rosiana Dmitry Medvedev no nanasonia ny governemanta ny didim-panjakana momba ny simplification ny fomba noho ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena ho an’ny vondrona sasany ny mpandraharaha vahiny, mpampiasa vola sy mahay manam-pahaizana manokana. Ireo fanitsiana ny lalàna momba ny fanamorana ny acquirement ny maha-olom-pirenena, dia nanao sonia ny lalàna ao amin’ny Medvedev Ôkt, no nankatoavina tamin’ny volana jona. Ny fiovana fiantraikany afa-tsy ireo mpandraharaha manana vola miditra isan-taona dia nihoatra ny folo tapitrisa robla (dolara) sy ny mpampiasa vola izay tsy manana anjara ao amin’ny renivohitry ny orinasa rosiana, dia mihoatra ny folo isan-jato. ‘Miaraka amin’ny tanjona ny
Ny fisaraham-panambadiana, rosiana style — Rosia Mihoatra ny
Araka ny antontan’isa, isaky ny fahatelo ao amin’ny fanambadiana ao Rosia mifarana amin’ny fisaraham-panambadiana amin’ny telo taona voalohany. Loharano: Sary an-gazety, Rehefa Valery Leeching ny lehibeny nahazo ny selam-pitatitra iray be loatra ny fotoana, dia totohondry azy ao amin’ny maso. Leeching voaroaka, saingy izy dia nahatsapa ho toy ny mahery fo -izany andro izany. Ny tena vokatry ny zavatra niseho taty aoriana. Valery nanomboka mitady asa, fa raha ampiharina ho an’ny asa, ny mpampiasa mety te-andinin-tsoratra masina. Ary rehefa niantso ny toerana teo aloha ny asa, Leeching ny lehibeny teo aloha nilaza fa izy dia manjary mpiasa. Leeching ny vadiny,
fananana fizarana — ny dikany teny rosiana amin’ny teny rosiana ireo Mpisolovava
Na dia eo aza ny nandoa ny saina ho amin’ny filàna ao an-dalam-pandrosoana mba hankafy ny fahazoana fanafody, ny fahalalana, ny teknolojia ary fahaizana ny zo sy ny tombontsoa ara-dalàna dia tsy tanteraka raisina, sy ny fitsarana ny fanapahan-kevitra indraindray tsy ara-potoana novonoina. miantehitra amin’ny Mamily Board nanaiky fari sy ny asany fomba, izay manome ho an’ny famindrana ny vilany-Bosniaka haavon’ny toerana ny sampan-draharaham-Panjakana. nametraka tanjona vaovao, mba haka bebe kokoa fampandrosoana ny tombony avy amin’ny FDI, anisan’izany (a) mampiditra ny fifaninanana ho ny eto an-toerana ny orinasa sy ny tolotra (b) ny fampitomboana ny vola miditra taranaka sy ny
Ny governemanta rosiana ho ‘maminavina ny hankatò’ ny Otkritie banky vondrona. Inona no dikan’izany
Rosia ny Banky Foibe dia nanambara ny fandaminana indray ny banky vondrona»Otkritie»ny iray amin’ireo lehibe indrindra ny ara-bola ny andrim-panjakana ao amin’ny firenena, an-jatony lavitrisa robla eo amin’ny tantara. Ny Otkritie banky vondrona dia ahitana ny banky amin’ny anarana sy ny banky Tochka, Roketbank, Rosgosstrakh Banky, ary ny fikambanana hafa. Ireo rehetra ireo andrim-panjakana dia izao ho»hahitsy»Eny, ny fandaminana indray dia midika hoe ny banky dia tsy mahafeno ny fepetra rehetra ny regulator, Rosia ny Banky Foibe, raha tsy misy ny vola avy amin’ny»reorganizer»Rehefa ny Banky Foibe mahita toe-draharaha tahaka izany, dia manana safidy roa: dia manafoana ny banky ny
Fiahiana ara-tsosialy ao Rosia: Ny rafitra, ny tahan’ny sy ny soa nanazava — mpila ravinahitra Mpitarika ny Rosia — Mpisolovava rosiana
Ianao no afaka ho an’ny fiahiana ara-tsosialy ao Rosia. Mianatra momba ny rosiana rafitra fiahiana ara-tsosialy sy ny fandraisana anjara, plus how to get a rosiana laharana fiahiana ara-tsosialy ary milaza fiahiana ara-tsosialy ao Rosia. Ny Rosia rafitra fiahiana ara-tsosialy dia ny andraikitry ny fanjakana, indrindra indrindra overseen avy amin’ny Ministeran’ny Asa sy ny Fiarovana ara-Tsosialy. Amin’ny toe-javatra sasany, ireo mpiasa vahiny izay tsy maharitra na maharitra hipetraka dia mendrika ny hahazo ny tombontsoa azo avy amin’ny karama avy amin’ny alalan’ny fiahiana ara-tsosialy ao Rosia, raha toa izy ireo efa nandoa ny vola ilaina manokana ho volam-panjakana. Samy vola dia
Izay vola sy ny tombontsoa azo avy amin’ny ny tsy an’asa, ny vehivavy bevohoka ao Rosia — Vehivavy Ny Fironana
Angamba, ny vehivavy bevohoka dia liana amin’ny soa izay miantehitra amin’ny azy avy ny fanjakana. Ary raha ho avy ny reniny dia tsy maintsy ofisialy ny asa, izany hoe ny mpikarakara tokantrano, na tsy mbola vita ny fianarany (heverina ho mpianatra iray), dia afaka toy izany ny bevohoka tsy an’asa fanantenana ho an’ny fanampiana ara-tsosialy. Azonao atao ny hizara antontan-taratasy ho an’ireo handray tombontsoa amin’ny Birao akaiky indrindra ny Fiarovana ara-Tsosialy ny Mponina (interview). Na izany aza, ny fandoavam-bola izay namatsy ara-bola avy amin’ny Fiantohana ara-Tsosialy Tahirim-bola (soa ho an’ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana ary ny vehivavy izay efa
Ny andraikitra sy ny famerana tonga ho vokany rehefa ny olona iray dia omena ny rosiana olom-pirenena RC Mponina Centre
Rehetra ireo olom-pirenena rosiana efatra ambin’ny folo taona no ho miakatra ny fiainana any Rosia dia tsy maintsy manana mpanampy an-trano ny pasipaoro (ny olom-pirenena ny jeneraly pasipaoro), raha ho an’ireo izay mipetraka ivelan’i Rosia dia tsy maintsy manana»vahiny»pasipaoro (pasipaoro ho amin’ny fitetezana iraisam-pirenena) dia hentitra voarara ny manao marika eo pasipaoro tsy mahafeno ny fepetra napetraky ny lalàna (toy ny manamarika fa manao ny pasipaoro manan-kery) Rehetra rosiana olom-pirenena, ary koa ny teratany vahiny, dia notakiana mba hisoratra anarana ao amin’ny ny toerana ny hijanona na fonenana ao Rosia: Mba ho afaka hiampita ny sisintany rosiana sy mandeha sehatra
Fitaterana ao Rosia
Ny fisian’ny amin andian-mavesatra, ahitana ny farany Ny eoropeana ny milina, ary koa ny manokana ny famokarana fototra, mamela Atlanta L orinasa mandamina entana delivery ny saika na inona na inona toerana misy azy ao Rosia, be ny fampihenana ny vola lany amin’ny fitaterana, mba hamaha ny mpanjifa’ ny fifamoivoizana olana haingana araka izay azo atao. Manokana ny fanaraha-maso ny asa fanompoana ny entana nanatitra orinasa Atlanta L, miaraka amin’ny fanampian’ny ny farany ara-teknika, ny fitaovana, manara-maso ny entana tetezamita any Rosia, noho izany, dia afaka hanontany foana, izay toerana feno fiara. Izany no zava-dehibe indrindra raha nitondra avo-danja entana,
Mpandeha Fitaterana Fitsipi — Mpandeha
Zaza latsaky ny folo dia tsy mahazo mandeha amin’ny lavitra fiaran-dalamby raha tsy miaraka amin’ny olon-dehibe afa-tsy amin’ny toe-javatra ny mpianatra na mpianatra manatrika ny toeram-pampianarana amin’ny lalamby. Ao amin’ny iray amin’ireo tapakila, mpandeha dia afaka mitondra ny tanana entana milanja tsy mihoatra ny enina amby telopolo kilao (na dimam-polo kg amin’ny kalesy roa-berth efitrefitra (natory kalesy) maimaim-poana. Ny isa ny tanana entana ny lafiny telo tsy tokony hihoatra ny sm. Ankoatra ny namela ny tanana entana, isaky ny mpandeha dia mahazo maka ny kitapo, poketra, binoculars, ski sy ski tapa-kazo, ny jono tehina, ny fakan-tsary, elo, ary hafa kely
Ny fananana ara-tsaina ao Rosia — Asa — Kaonty Rosia
Rosiana ho fiarovana ny IP dia voafehin’ny Fizarana IV ny amin’ny rosiana-Pirenena Fehezan-dalàna, ny sasany ny lalàna federaly, ary mazava ho azy fa am-polony ny fifanarahana iraisam-pirenena amin’ny ara-tsaina fananana zo nosoniavin’ny Rosia. Ohatra, ny Fitsarana noho ny Fananana ara-Tsaina Zon’ny dia naorina tany Rosia tamin’ny ihany, telo taona lasa izay. Io fitsarana io dia mihevitra ihany ny fifandirana mifandraika amin’ny fananana ara-tsaina zon’ny na inona na inona ny antoko mandray anjara amin’ny raharaha, ary manompo toy ny ohatra ary koa ny fitsarana ambony na inona na inona toe-javatra izay mandinika na izay heverina misy hafa fanjakana ara-barotra ny fitsarana
Inona ireo antontan-taratasy ilaina ho lovany. Lisitry ny taratasy fisoratana anarana ny lova